"Gangotri" Opp Dr T.M.A Pai Hall, M.G Road - I-Airbnb
Ikamelo e-ikhaya ibungazwe ngu-Vijay
1) Itholakala enhliziyweni yedolobha.
2)10min ukusuka ogwini.
3)Inxanxathela yezitolo i-Empire mall isekupheleni komgwaqo.
4)5min ngokuhamba ngezinyawo usuka esikhungweni esijwayelekile sikaDkt T.M.A Pai.
5) Ukuma okuzenzakalelayo ekupheleni komzila
6) 1.5Km ukusuka esiteshini samabhasi e-KSRTC.
I-7) 15min Ukusuka eMangalore Central Railway Station.
Woza uhlale Ekhaya lethu enhliziyweni yeMangalore.
Leli gumbi elipholile nelithokomele liqhelelene nesiphithiphithi esimaphakathi nedolobha. Uzoyithanda indawo yami ngenxa yokuthula, ubumfihlo, indawo kanye ne-ambience.
Ikamelo lakho lokulala liyakhanya (amahora ayi-10 okukhanya kwemvelo), libanzi futhi linefenisha ngokugcwele. Sinombhede olala abantu ababili onomatilasi omuhle, imicamelo eyengeziwe nezingubo zokulala kanye netafula eliseceleni kombhede. Iwodilophu, itafula lokugqoka kanye nenqwaba yezincwadi ongazifunda. Indlu yokugezela inendlu yangasese esentshonalanga, indawo yokugeza. Igumbi linefeni, izibani namalambu.
Le bungalow inamagumbi okulala ayi-7, ikhishi elibanzi, ihholo elikhulu esilihlukanise laba yigumbi lokuhlala elisemthethweni (i-TV/indawo yokuphumula) kanye negumbi lokudlela.
Uma ukhetha ukupheka nokudla, indawo yethu ikunikeza zonke izinsiza zokupheka ezihlanganisa i-owen, ifriji, isitofu segesi, i-blender kanye nezitsha.
Sitholakala esiphambanweni sesibili se-Kodialguttu, sizungezwe izindawo zokudlela eziningi kanye nekhefi futhi yonke into ongayidinga ukuze uhlale unethezekile iwuhambo lwamaminithi nje. Cishe imizuzu emi-3 ukusuka e-Empire Mall (igrosa/ukuthenga). Futhi, uDkt T.M.A Pai Hall (MG.Road) imizuzu emi-5 nje yokuhamba.
E-Mangalore, indlela eyinhloko yezokuthutha zomphakathi orisho bezimoto namabhasi Endawo. Ngakho-ke orisho bezimoto bayatholakala 24/7 ngaphandle kwesango lomphakathi wethu. Ashibhile futhi ayindlela engcono kakhulu yokuhamba ngaphandle uma uqasha amasondo amabili.
Ukudla kwasekuseni, Kwasemini kanye Nedina akufakiwe kodwa kungenziwa kutholakale uma ucelwa ngentengo engu-200/- ikhanda ngalinye. Sicela usazise ngezinhlelo zakho zokudla ekuseni ukuze sikwazi ukuhlela usuku.
Okokugcina, uma kukhona okudingayo sicela ungangabazi ukubuza!
4.62 out of 5 stars from 107 reviews
4.62 · 107 okushiwo abanye
Siyathanda ukusebenzelana nezivakashi zethu futhi sizibonise edolobheni lethu. Sicela ungangabazi ukusicela noma yini.